China Hexadecyl trimethyl ammonium chloride, CAS No 112-02-7 ， 1631 mveliso kunye nabenzi | Imichiza yaseKerui
I-hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631)
Inombolo ye-CAS 112-02-7
Igama lorhwebo: 1631
I-Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride)
ICeteartrimonium Chloride, Quaternary ammonium ityuwa 1631
ICationic quaternary ammonium ityuwa 1631
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) ine-bactericidal, anti-mildew;
I-Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) inokuthamba okugqwesileyo kwaye isetyenziswa kakhulu kwi-shampoo, iimveliso zokhathalelo lweenwele, iithambisi zamalaphu kunye nezinye iimveliso.
I-Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) inokusetyenziswa njenge-emulsifiers kumbala, idayi, ishishini le-asphalt nakwamanye amashishini.
I-Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) isetyenziswa njenge-emulsifier ukumelana nobushushu obuphezulu beoyile-emanzini-emulsion yodaka kwaye ikwasetyenziswa njenge-anti-stick arhente kushishino lwe-latex xa kusombiwa imithombo enzulu kushishino lweoyile;
I-Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) inesigaba sokusebenza sokudluliswa kwesigaba esikhethekileyo kwaye sisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yeekhemikhali entle, ukuhlanganiswa kwamayeza kunye namanye amashishini;
Iphakheji kunye nokuGcina:
50Kg, 175Kg, 200Kg kwidrama yeplastiki, iimfuno zabathengi. Ukugcina unyaka omnye kwigumbi elinomthunzi nendawo eyomileyo.
I-Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) yinto ekrwada yokuhlanganiswa kwemichiza phakathi, thintela ukudibana neliso nolusu, wakuba uqhakamshelane nabo, ugungxula ngamanzi.